Shock Hypovolaemic (သွေးထုထည်နည်းခြင်းကြောင့် ရှောခ့်ဖြစ်ခြင်း) - Page4of6- Hello Sayarwon
Shock Hypovolaemic (သွေးထုထည်နည်းခြင်းကြောင့် ရှောခ့်ဖြစ်ခြင်း)
Thin Myat Sandi Cho မှ ရေးသားသည်။6ရက် အကြာက တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Shock Hypovolaemic (သွေးထုထည်နည်းခြင်းကြောင့် ရှောခ့်ဖြစ်ခြင်း) ကဘာလဲ။
ခန္ဓါကိုယ်တွင်းသွေးထုထည်၂၀ရာခိုင်နှုန်းထက်ပိုပြီး ဆုံးရှူးံသွားခြင်းကြာင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ရှော့ခ်ရခြင်းကနေ အသက်အန္တရာယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရည်ဓါတ်ဆုံးရှုံးငြခ်းကြောင့် နှလုံးကနေ သင့်ခန္ဓါကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေဆီ သွေးလုံလုံလောက်လောက်မပို့ပေးနိုင်ပါဘူး။ ရလဒ်အနေနဲ့ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေပျက်စီးသွားခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ အရေးပေါ်ကုသမှုလိုအပပ်ါတယ်။
Shock Hypovolaemic (သွေးထုထည်နည်းခြင်းကြောင့် ရှောခ့်ဖြစ်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အဖြစ်အများဆုံးရှော့ခ်ရခြင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အရမ်းငယ်လွန်းတဲ့ကလေးတွေနဲ့ အသက်ကြီးသူတွေမှာ ဖြစ်နိုင်ချေအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Shock Hypovolaemic (သွေးထုထည်နည်းခြင်းကြောင့် ရှောခ့်ဖြစ်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
သွေးထုထည်နည်းခြင်းကြောင့် ရှောခ့်ဖြစ်ခြင်း ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
အရည်သို့သွေးဆုံးရှူံးမှုပမာဏပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြာနိုင်ပါတယ်။ လက္ခဏာတွေအားလုံးက အသက်အနဍ္ဍတရယ်စိုးရိမ်ရပြီး အရေးပေါ်ကုသမှုလိုအပ်ပါတယ်။
အတွင်းကလီစာတွေသေါးယိုတဲ့အခြေအနေတွေမှာ ရှော့ခ်ရခြငးလက္ခဏာမပြမချင်း ရောဂါသိနိုင်ဖို့ ခက်ပါတယ်။ ပြင်ပသွေးထွေက်ခြင်းကတော့ မြင်သားပါတယ်။
ပြင်းထန်ပြိး အရေးပေါ်ကုငသမှုချက်ချင်းကုခံယူဖို့လိုတဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့
Shock Hypovolaemic (သွေးထုထည်နည်းခြင်းကြောင့် ရှောခ့်ဖြစ်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ရှော့ခ်ဖြစ်ရလောက်တဲ့အထိ သွေးပမာဏဆုံးရျူး့ခြင်းက အောက်ပါပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်
မတော်တဆမှုကြောင့် ထိခိုက်မိရာမှ သွေးထွက်ခြင်း
ကလီစာများမှသွေးယိုခြင်း သို့ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့နေရာတွင်သန္ဓေတည်ရာမှ ပေါက်ထွက်သွားခြင်း
သွေးဆုံးရျူးံမှုပမာဏအပြင် ကိုယ်တွင်းအရည်များဆုံးရျူးံခြင်းကလေည်း သွေးပမာဏကိုနနည်းစခြေင်းမှာအဓိကကျပါတယ်။
သာမန်မှာဆိုရင် အောက်ဆီဂျင်နဲပအခြားအရေးပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကို သွေးကနေတစ်ဆင့် အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေဆီတစ်ရှူးတွေဆီ ပို့ပေးပါတယ်။ သေါးအများကြီးဆုံးရျူ့သွားတဲ့အခါမျာ နျလုံးကနေခန္ဓါိကိုယ်တစ်ခုလုံးဆီ လုံလုံလောကေလောက်သွေးမပို့ပေးနိုင်တော့ပါဘူး။ ခန္ဓါကိုယ်က ဒီပစ္စည်းတွေကို ပြန်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်တာထက်ပိုပြီးဆုံးရှူါ့်သွားတဲ့အခါမျာ ခန္ဓါကျိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပေိုင်း လုပ်ဆောင်ရည်တွေကျသွားပြီး ရှော့ခ်လက္ခဏာတွေပေါ်လာပါတယ်။ သွေးဖိအားသွေးပါင်ချိန်ထိုးကျသွားခြင်းက
ငါ့ဆီမှာ Shock Hypovolaemic (သွေးထုထည်နည်းခြင်းကြောင့် ရှောခ့်ဖြစ်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
သွေးထုထည်နည်းခြင်းကြောင့် ရှောခ့်ဖြစ်ခြင်း ဖစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝမ်းလျှောခြင်းနဲ့အော့အန်ခြင်းကို အဖြစ်နိုင်ချေများဆုံးအုပ်စုဖြစတဲ့ ကလေးငယ်တွေမှာ ရေဓါတ်ခန်းခြောက်ခြင်းကို အထူးသဖြင့်ခံနေကြရပါတယ်။
အသက်ကြီးလာလေ ခန္ဓကိုယ်တွင်းအရည်ပမာဏ နည်းလာပြီး ရေကိုသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနိုင်စွမ်းလျော့လာတဲ့အပြင် ရေငတ်ခြင်းကိုအာရုံခံစားနိင်စွမ်းလည်း လျော့ကျလာပါတယ်။
မကုသဘဲထားတဲ့အီးချိုရောဂါသည်ဒါမှမဟုတ် ဆီးချိုရောဂါအခြေအနေပြင်းထ်န်နေသူတွေမှာ သွေးထုထည်နည်းခြင်းကြောင့် ရှောခ့်ဖြစ်ခြင်းရှာ့ခ်ရနိုင်ချေများပါတယ်။
Shock Hypovolaemic (သွေးထုထည်နည်းခြင်းကြောင့် ရှောခ့်ဖြစ်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်က ကိုယ်ခန္ဓါပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေ ချက်ခငျးလုပ်ဆောင်ပါလိ့်မ်ယ။
သွေးထွက်များခြင်းက ချက်ချင်းသိနိုင်ပြီး အတွင်းပိင်းသွေးယိုငြခ်းကတော့ တခါတလေမှာ သွေးထုထည်နည်းခြင်းကြောင့် ရှောခ့်ဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာတွေမပြသေးမချင်း သိနိုင်ဖေို့ခက်ပါတယ်။ ပြငပလက္ခဏာတွေအပြင် ဆရာဝန်က
သွေးထုထည်နည်းခြင်းကြောင့် ရှောခ့်ဖြစ်ခြင်းကို အတည်ပြုဖို့အတွက် များပြားလှတဲ့စစ်ဆေးမှုတွေလည် းပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။
သွေးစစ်ခြင်း – အီလက်ထရိုလိုက်ဟန်ချက်မမျှတမှုများ၊ ကျောက်ကပ်၊ အသည်းလုပ်ဆောင်ရညတေါကို သိရှိရန်ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွူကိုမြင်နိုင်ဖေို့အတွက် စီတီစကန်ဖတ်ခြင်း အယ်ထရာဆောင်းရိုက်ခြင်း
အစာရေမျိုပြွန်နဲ့အူလမ်းကြေင်းအင်္ဂါတွေကို စမ်းသပ်ဖို့အတွက် မှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်း
ဆီးအိတ်အတါင်း ဆီးပမာဏကိုတိုင်းတာဖို့အတွက် ဆီးပိုက်ကက်သီတာထည့်ခြင်း
သင့်လက္ခဏာတွေပေါ်အခြေခံပြီး အခြားစစ်ဆေးမငတွေလည်း ပြုလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
Shock Hypovolaemic (သွေးထုထည်နည်းခြင်းကြောင့် ရှောခ့်ဖြစ်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ုရျော့ခ်လက္ခဏာတွေပြတာနဲ့ အရေးပေါ်နံပါတကို ချက်ချင်းခေါ်သင့်ပါတယ်။ အရေးပေါ်အကူအညီမလာသေးခင်မှာ အောက်ပါတို့ကိုပြုလုပ်ထားသင့်ပါတယ်။
ခြေထောက်ကို ၁၂လက်မလောက်မြှင့်ထားပြီး လူနာကိုလဲလျောင်းနေစေခြင်း
ဦေးခါင်း၊ လည်ပင်းနောက်ကျောထိခိုက်မှုတွေ ရှိထားတယ်လို့သံသယရှိမယ်ဆိုရင် လူနာကိုမလှုပ်ရှားခိုင်းခြင်း
ဆေးရုံရာက်တဲ့အခါမှာ လူနာကို သွေးဆုံးရှူံးမှုကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းဖို့နဲ့ သွေးလှည့်ပတ်မှုကောင်းစေဖို့ အရည်ဒါမှမဟုတ် သွေးတွင်းပစ္စည်းများကို သွေးပြန်ကြောကနေတစ်ဆင့်
ဆရာဝန်က သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေဖို့နဲ့ လိုအပ်တဲ့နေရာကိုသွေးရဖို့ နှလု့းညှစ်အားကောင်းတဲံဆေးတွေကို ညွှန်ကြားပါလိမ့်မယ်။
ကူးစက်ပိုးဝင်ခြင်းကြောင့်ရှော့်ခ်ရခြင်းနဲ့ ဘတ်တီးရီးယားကူးစက်ပိုးဝင်ခြင်းကိုကာကွယ်ဖို့ ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေးတွေကိုလည်း ညွှန်းပါလိမ့်မယ်။
နှလုံးလုပ်ဆောင်ရည်ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းက ကုသမှုတွေထိရောက်မှုရျီမရှိ ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက သွေးထုထည်နည်းခြင်းကြောင့် ရှောခ့်ဖြစ်ခြင်း ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
သွေးထုထည်နည်းခြင်းကြောင့် ရှောခ့်ရခြင်းကို အများစုမှာကာကွယ်လို့မရနိုင်ပါညဘူး။ ထိခ်ုကမှုကြောင့် ဒါမှမဟုတ် ပြင်းပြင်းထန်ထန်နာမကျန်းဖြစ်ပြီးသါားတဲ့အခါမှာ ဖြစ်လေ့ရျပါတယ်။ ရေဓတာ်ခန်းခြောက်ခြင်းက အရည်တွေလုံလုံလောက်လောက်သောက်ခြင်းဖြင့် တခါတလေမှာ ကကွုယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဓါတ်ဆေားရည်လိုမျိုး အရေးပါတဲ့ဆားဓါတ်သကြားဓါတ်တွေကို ထိန်းပေးတြ့အရေည်တွေက ပြင်းပြင်းထန်ထန်အော့အန်ခြင်းဝမ်းလျှောခြင်းတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
Hypovolemic shock. http://www.healthline.com/health/hypovolemic-shock?s_con_rec=true&r=01#Outlook9 . Accessed March 18, 2017.
Hypovolemic shock. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dehydration/manage/ptc-20261161 . Accessed March 18, 2017.
Hypovolemic shock. https://www.activeforever.com/articlelist-all/a-hypovolemic-shock . Accessed March 18, 2017.